लसुन झींगाको साथ स्पेगेटी | भान्सा व्यंजनहरु
लसुन झींगाको साथ स्पेगेटी
मारिया vazquez | | पास्ता
सधैँ उस्तै तरिकाले पास्ता तयार गर्दा थकित हुनुहुन्छ? यहाँ एक नयाँ विधि छ जुन तपाईंको मेनूहरूमा भिन्नता छ। लसुन झींगाको साथ स्पेगेटी। एक समुद्री स्वादको साथ एक नुस्खा जसले हामीलाई भान्साकोठामा लामो समय लिनेछ र म तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन सक्दछु कि तपाईं धेरै स्वादिलो ​​हुनुहुनेछ।
हल्का सास बनाउनको लागि झन्डाको टाउको र शेलहरूको फाइदा उठाउनुको अलावा, रेसिपीले पनि लाल मिर्च मिसाएर यसलाई प्रदान गर्दछ। मसलादार पोइन्ट। व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो मन पर्छ किनकि यो सूक्ष्म छ, तर तपाईं यसलाई बिना गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं मसलादार साथ मित्र हुनुहुन्छ। के तपाई यसलाई चलाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
खाना पकाउने समय: 30 m
१ 190 ० जीआर स्पेगेटी
। 350० GR झींगा को
लसुन को3लौह
२ लाल मिर्च
Table चम्चा ताजा अजमोद
Table चम्मच ब्रान्डी
हामी झ the्गाको बोक्रा ताछ्यौं र टाउको र छाला दुबै जैतूनको तेलको एक चम्चाको साथ सासप्यानमा राख्यौं। मध्यम तातो हुँदा पकाउनुहोस् हामी टाउकोमा प्रहार गर्दछौं झींगा को एक टुक्रा चम्चा संग ताकि तिनीहरूले आफ्नो सबै रस जारी।
जब खोलहरू गुलाबी हुन्छन्, हामी ब्रान्डी समावेश गर्दछौं र हामी यसलाई लगभग पूर्ण संकुचन गरौं।
त्यसकारण, हामी एक गिलास पानी थप्छौं, कभर र १ minutes मिनेट को लागी खाना बनाउनुहोस्। हामी रिजर्भ गरिएको गाढा झोला ब्रोन प्राप्त गर्नका लागि हामी छाला र टाउको तानेर जान्छौं।
Spaghetti पकाउन गरौं पानी र नुन सहित एक सॉस प्यानमा, निर्माताको निर्देशनहरू अनुसरण गर्दै। एकपटक सकिएपछि, निकास र रिजर्भ गर्नुहोस्।
पास्ता पकाउँदा, हामी लसुन राम्ररी टुसाउँछौं र खोर्सानी र हामी रिजर्भ।
मध्यम आँचमा फ्राइying प्यानमा ol चम्मच जैतूनको तेल तताउनुहोस्। हामी झींगा थप्दछौं र जब ती गुलाबी र केही सुनौलो हुन्छन्, हामी त्यसलाई बाहिर निकाल्दछौं।
प्यानमा एक वा दुई थप चम्चा तेल थप्नुहोस् र कासाको लसुनको बाटा खोर्सानी जब लसुनले रंग लिन थाल्छ, आधा झींगा ब्रोथ र काटिएको ताजा अजमोद थप्नुहोस्, र तताउन ससलाई ल्याउनको लागि तनाव बढाउनुहोस् र कम गर्नुहोस्।
हामी स्पेगेटी समावेश गर्दछौं प्यानमा र मिक्स ताकि तिनीहरू राम्रोसँग सॉसको साथ गर्भवती छ। आवश्यक भएमा, हामी थोरै ब्रोथ थप्छौं जसले गर्दा तिनीहरू सुक्दैनन्।
सेवा गर्नु अघि, हामी झींगा थप्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » भाँडा » पास्ता » लसुन झींगाको साथ स्पेगेटी
मिठाई चिली सॉस संग साल्मन
पातलो टर्की र क्रीमको साथ तरकारी बोको सम्बन्ध